Resaky ny mpitsimpona akotry : hafetsifetsena amin’ny fanaovana fihetsiketsehana | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : hafetsifetsena amin’ny fanaovana fihetsiketsehana
Rehefa lany lainga teo amin’ny fandanian’andro nanaovana fifanilihana andraikitra mikasika ny adidy tsy vita, na ny tompom-pahefana mitantana sampan-draharaha samihafa na ny mpitarika vondrona pôlitika dia nitovy tetika avokoa indray. Tsy nisy fanentanana ho amin’ny fiombonana adidy ahafahan’ny tsirairay manatanteraka adidy araky ny anjara tandrify azy, ao anaty lamina sy fitsinjarana apetraky ny fifehezana ikambanana. Fady angamba izany, fa samy mandeha samy manao an’izay saim-pantany. Samy te ho deraina avokoa ka ny tetika dia ny fanaovana izay mba mampiavaka ny tena ary ho tazan’ny mponina. Tsy miova ny toe-tsaina maniraka amin’ny fanaovana an’izany. Takalom-patsa vidim-pihinanana lalandava no manjaka. Fihetsiketsehana entina hanambatambazana ny vahoaka mba hahatsiarovan’izy ireny valim-pitiavana rahatrizay rehefa tonga ny fotoana hanaovana safidy ao amin’ny trano fieritreretana mialoha ny fandatsaham-bato ao anatin’ny vata.
Anisan’ireo nanaitra maso niavaka dia ireo andian’olona nanao satroka vaovao mitovy loko. Nisy nifandiso anefa ny mpitazana izay tsy nandinika tsara. Ao ny tonga dia nihevitra fa irak’Ingahy Andry Rajoelina ireny andian’olona ireny noho ny lokon’ny satroka mavomavo manompo vonivony. Saika very an-dàlana noho izany ny tompon’antoka Ramatoa Ravalomanana ben’ny tanàna nefa mivandravandra eny
amin’ilay satroka ny soratra C.U.A.
Inona moa anefa ny asa tanterahan’ireny iraka manokana ireny ? Moa ve tsy ny asa tokony fanao andavan’andro ? Moa ve tsy mitolo-tena mikasika ny tsy fahavitana adidy tsotra isan’andro ka miandry fitrangan-doza vao mikoropaka ny fanaovana hetsika toy izao.
Tsy latsak’izany koa ny fanadiovana nataon’ny miaramila teo amin’ny kisilasila sy tatatra manodidina ny toby etsy Ampahibe. Nokatsakatsahana toy izany ny ahitra lava-sanga, noravaravana avokoa ny lobolobo sy kiridrihitra. Inona ary no ataon’ireo foloalin-dahy mandritra ny taona rehefa tsy mananika an-tanàna ny fahavalo toy ny pesta ? Aleo angamba hanafika, hahitany izany atao hoe Tafika.